EyeDwarha 11, 2018 admin
Zaif Exchange uveza icebo imbuyiselo $ 60m lomnqweno yimfumba crypto
Tech Bureau, le nkampani emva exchange Japanese crypto Zaif, phendla isicwangciso imali ukuze abuyekeze abasebenzisi emva $60 million lomnqweno yimfumba okwenzekileyo eqongeni kwinyanga ephelileyo. Tech Bureau uthi utyikitye isivumelwano ne Fisco - utyalo ngokuqinileyo edweliswe esidlangalaleni eJapan - yokukhuphela ishishini Zaif ukuya Fisco Cryptocurrency Exchange.
abasengozini, kungoku nje enye 16 ukutshintshiselana crypto ilayisensi Japan, zafumana uluhlu lomnqweno yimfumba kwi Sept. 20 xa abanye $60 million cryptocurrencies baqhawula ebiweyo, kuquka phantse 6,000 Bitcoin. Njengenxalenye transfer deal, Tech Bureau Fisco luzoqala inkqubo imbuyekezo umthengi, leyo usebenzise eyakho Bitcoin alo ukubuyisela abasebenzisi olahlekelwe asethi crypto. Tech Bureau wathi emva koko, bekuya inokuyiphelisa ishishini layo cryptocurrency exchange lize liphelise ilayisenisi ebhalisiweyo kunye Financial Agency Services, Regulator kwiimalike zemali yaseJapan.
sidechain Bitcoin “ulwelo” idlalwa
3 iminyaka ekwenziweni, sidechain lokuqala bitcoin kaThixo “ulwelo” manje aphile. Wango ngu Blockstream, Ulwelo kunjalo ukuphunyezwa kakhulu obuphambili iteknoloji ebizwa sidechains ukuba lixesha elide a grail engcwele Bitcoin coders (nangona into esaziswayo namhlanje inokuba uguqulelo wankcenkcesha-phantsi lokuqala “trustless” umbono). kunjalo, loo nto yaze yangxenga ifuthe lomanyano oko banako ukuba inkampani, yasungulwa phezulu open-umthombo coders bitcoin xa 2014, uye wadala. Yakhelwe nya blockchain ephilayo, KuLwelo ngoku iza kusetyenziswa ukuthwala imithamo ezinkulu intengiselwano ngesantya ephezulu ngenxa eziliqela beenkampani ezinkulu bitcoin xa.
Namhlanje ke sisiganeko njengoko network ekugqibeleni evula ngenxa onke amahlakani Blockstream ukuba usebenzise kumsebenzi womnatha main Bitcoin kaThixo, yiyo i, okunye real. Blockstream COO uSamson ingca uthe “Oku kuza kuxhasa yendalo bitcoin kuba unako ukurhweba ngokukhuselekileyo ngakumbi ngokukhawuleza… Yinto ilungele ukusetyenziswa yorhwebo. Kule ndawo, yinto nje lokufumana Exchange yokuhlanganisa… Kuya engase kokwenza iibhiliyoni zeerandi ezixabisa bitcoin ngosuku.”
Kwinqanaba yobuchwephesha, kunomfana kuguqula bitcoin yayo “LBTC” - ithokheni bitcoin ulwelo - nto leyo ibiqhotyoshelwe eyona Bitcoin. Xa kuthunyelwa khona, kwangaphambili, ungahambisa imali ngeenxa akhuselekile kwaye kakhulu ngokukhawuleza kwi chain main bitcoin. Ngaphezu koko, kule veki ezayo, Blockstream ikhomishini iza kukhupha isicwangciso isipaji ezenziwe ngqo iintengiselwano Ulwelo. Plus, bitcoin isipaji GreenAddress yenkampani sele lixhasa Ulwelo. Ababoneleli Hardware isipaji Ledger kunye Trezor ziye obubhenqwe izicwangciso ukuba amkele ubuchwepheshe nayo.
Harvard, Stanford, & MIT iziphiwo utyalo-mali crypto
Kungcono 5 amaziko ezinkulu emfundo kuquka University Harvard, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Dartmouth College, kunye University of North Carolina aye elowo imali ubuncinane enye cryptocurrency mali ngokusebenzisa iziphiwo zabo.
le 5 iziphiwo eyunivesithi ziye imali amashumi ezigidi zeerandi kule mali, nto leyo imali zombini cryptocurrencies emzimbeni kunye nokulingana kwiinkampani cryptocurrency. intatheli Inkcazelo Jon Victor wachaza: "A move ngu esineziphiwo ezininzi zibe mali eziya ukugembula ngqo kwi cryptocurrencies ibonisa utshintsho olukhulu lwabatyali ngayo eklasini asethi, ngendlela efanayo ukuba amaziko kule minyaka ilishumi idlulileyo baba lula ukutyala imali kwiinkampani zokwakha zabucala. Eseka kumaziko ezinjalo lokhozi akwazi ukunceda ukuqinisekisa cryptocurrencies, ezo kuseyinto iyingozi kakhulu yi abatyali-mali abaninzi lwamaziko. "
Post Previous:Blockchain News 10.10.2018